Home Wararka Ciidamada Itoobiya oo caawa lagu weeraray degaanka Bardaale
Ciidamada Itoobiya oo caawa lagu weeraray degaanka Bardaale
Warar deg deg ah oo ka soo gaaray MOL degaanka Bardaale oo ka tirsan Gobolka Baay ayaa shegaya in caawa miinada dhulka la galiyo loo galiyay cutubyo ciidan oo ka tirsan ciidamada Itoobiya.
Qaraxa ka dib ayaa caawa waxaa la weeraray ciidankii Itoobiyaanka ahaa ee la socday kolonyada ciidanka halkaas oo ay ka dhiteen tiro ciidan oo aan la shaacinin. Deegaanka uu qaraxa ka dhacay ayaa ah deegaanka uu ka soo jeedo Shiikh Mukhtaar Roobow. Wixii ku soo kordha gadaal ayaan idinkaaga soo shegi doona.
Previous articleWhy Somali diaspora failed practicing good governance ?
Next articleDowladda Burundi oo ku gacan seyrtay in ciidankeeda lagu bedelo ciidamada Eriteriya
Isku shaandheytii Golaha wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada oo soo gaaray gabo-gabo...
Iskuulo u xirmay weerarada Al shabaab ee Gudaha Kenya.